အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: အချဉ်ပေါင်း (၂)
တနေ့ကပဲ ရေးနေသေးတယ် ခုတော့ နောက်ထပ်နောက်ဆက်တွဲ အပုပ်နံက ဆက်တိုက် ဆိုသလို လိုက်ချလာတာပါပဲ မြန်မာစကား ပုပ်လို့ ပေါ် ဟုတ်လို့ကျော်ဆိုတာ သိပ်မှန်တယ် ရှေးလူကြီးတွေ သိပ်ပြောတတ်တာပဲ
ဖော်ဝပ်မေးက နေရလာတာလေးပါ အရင်ပိုစ့် နဲ့ဆက်နေလို့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဘာလိုလိုနဲ့ တီချမ်း ရဲ့ဘလောခ်လဲ အတင်းအဖျင်း သတင်းစဉ် ဖြစ်တော့မယ်
Posted by တီချမ်း at 3:53 PM
ချစ်ကြည်အေး July 8, 2011 at 9:36 PM
တီတို့လည်း ဒါမျိုးတွေ လုပ်တယ်ပေါ့လေ....ဟဟဟ စူပါဂေါ့စစ်ကြီး :))
Snow July 8, 2011 at 9:40 PM
ရှော့ပင်းစင်တာမှာ ဆိုင်ဖွင့်မလား စဉ်းစားနေတာ။ ဒါဖတ်ပြီး တော်တော်လန့်သွားတယ်။ ထိုင်နေရင်မှ ငွေက လက်ထဲမှာ ဒီအတိုင်းလေး နေနေဦးမယ်နော်။
ရှဲတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းသတင်းတွေ သိရတာပေါ့။
တီချမ်း July 9, 2011 at 12:22 AM
i know u all are waiting for this from me,
and i know u love it
these are just the bits and pieces,
till the big one then...
Ko Boyz July 9, 2011 at 1:24 AM
Anonymous July 22, 2011 at 7:57 AM
တော်ဝင် ဆိုတဲ့နာမယ်နဲ့ဆိုရင် မကောင်းတာဘဲဖြစ်မယ် များဖြစ်နေလားမသိဘူး
U are right to say. I know about him and company.Last 12years ago i worked in there as QS post and they want us to train @ head office about 3months. During3months we dont want to work any more there and resigned. Cos he always came and see to us and talking dont like. Really rude and crude if we are not follow him.
That means he want to tough our head or something like as.
We are professional and dont want his manner anymore. when our group resign from there he did not accept. We are dont care. His father, brother,sister also same as him , so proud , rude and crude.
တော်တော်လေးကို မိုက်ရိုင်းတဲ့သူပါ..ရိုင်းတာမှလေ မျိုးနဲ့ရိုးနဲ့ဆိုသလိုပဲ..တရုံးလုံဆွေမျိုးချည်းပဲခန်းထားတာ..အမျိုးမတော်တာဆို သူ့အတွင်းရေးမှူးအမျိုးသမိးပဲရှိတယ်..အဲဒါကတော့တစိမ်းခန့်မှကောင်းတာလေ..ကိုင်ချင်တာကိုင်ထိချင်တာထိလို့ရအောင်..
တစ်ကယ်ပြောတာ စကားပြောရင်လေ. ခေါင်းကိုင်လိုက်. ပုခုံးလိုက်နဲ့ နှာဘူးအမျိုးအနွယ်ကုမဏီ..သမီးကရော ဘာထူးလည်းကိုးရီးယားကားတွေကအခုမှပေါ်ပြီးတဖက်သတ်ကြိုက်တာတွေ မြင်ဘူးတာမလား..သူ့သမီးကခိုင်သင်းကြည်မောင်မြတ်မင်းမောင်ကိုကြိုက်လိုက်တာမှ .ရှက်ဖို့တောင်ကောင်းတယ်..တစ်ခုတော်တာက မြတ်မင်းမောင်တော်တော်လေးကိုတော်ပါတယ်..လုံးဝကို မလှုပ်ဘူး..